Lọ ọrụ ndị uwe ojii na ndị agha - ndị uwe ojii na ndị agha China, ndị na-eweta ya
SR223B UAV nyocha
1.Product ọrụ na iji SR223 Rada bụ tumadi mejupụtara 1 Rada array, 1 ike akara igbe na 1 turntable. A na-eji ya maka nchọpụta, anya na akara ngosi nke micro / obere ndị nkịtị drones na mpaghara ndị dị mkpa dịka ụlọ mkpọrọ, ihe ngosi, na ntọala ndị agha. A na-enye ozi trajectory dịka ọnọdụ, ebe dị anya, ịdị elu na ọsọ nke ebumnuche. 2.Main ngwaahịa nkọwapụta Nkebi ịrụ ọrụ kwa Usoro sistemụ usoro nhazi (azimuth machine scan + pitch phas ...
Isi: LT-600 Desktop dị egwu mmiri nchọpụta bụ ụdị ọhụrụ nke ihe egwu mmiri dị egwu. Nkà na ụzụ a eruola n'ọkwa dị elu. Ngwaahịa a nwere ike ịchọpụta akpịrị ọkụ, ihe mgbawa na mmiri na-emebi emebi ma na-egbochi mmiri nke nwere mmiri dị egwu (nke nwere ike ibute nsị ma ọ bụ mgbawa) ịbanye na mpaghara nchekwa. Ọ bụ ụlọ ọrụ nyocha nchekwa dị mkpa maka ọdụ, ụzọ ụgbọ oloko, ụlọ ọrụ gọọmentị, ámá egwuregwu na ndị ọzọ ndị mmadụ jikọtara ọnụ na impor ...
W38M Ihe mgbawa mgbawa
1.Overview W38M Ihe mgbawa na-ejikarị eme ihe maka disintegration nke ihe mgbawa ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa amaghị. Ọ nwere ike izute mkpa nchekwa mgbe ndị uwe ojii pụrụ iche na-ewere ọrụ EOD na-eyi ọha egwu. W38M nwere ike iwepu ihe egwu ma hụ na nchekwa ndị uwe ojii pụrụ iche. Enwere ike iji W38M ihe mgbawa mee ihe na ọnọdụ ebe ihe mgbawa na-amaghị ama. Ọ dị nchebe, ntụkwasị obi na ike ibibi ike. 2.Specification Size ： 500mm * 440mm * 400mm Weight ： 21kg Launcher length ： 500mm Launcher diamita: ...
A na-ejikọ ọta na-egbuke egbuke na-achụsasị acousto-optic, nke nwere ọrụ nke ntigbu na-egbuke egbuke na ịgbasa sonic n'otu n'otu, enwere ike iji ya dị ka iwu na ndu ndu ndu. Gbanwee mgba ọkụ ike ọta, ihe ngosi ọkụ eletrik na-egosiputa voltaji (ngosi 10 ~ 12V), mgbe ahụ ị nwere ike ịrụ ọrụ ọkụ ọkụ siri ike, ịgbasa ụda olu na mkpu mkpu n'otu n'otu. Ọrụ mgbasa abụọ a nwere ike ịrụ ọrụ iche iche ma ọ bụ n'otu oge. Hụ ...
Sistemụ nkwupute ụda TS-Micro (LRAD ngwaọrụ dị nso)
Nkọwapụta Ngwaahịa loud Igwe okwu na-ebupụta ụda bụ ihe nchebe nwere ọgụgụ isi iji gbasasịa igwe mmadụ na-enweghị imetụ na imerụ ahụ. Ezubere ya iji zute ihe ọ bụla gbasara arụmọrụ ma ọ bụ mmeghachi omume mberede nke chọrọ ụda ịdọ aka ná ntị doro anya na ozi olu. Ngwaọrụ a nwere ike ịhapụ mkpọtụ siri ike nke na-eme ka o siere ndị mmadụ ike ịnọ gburugburu ya na-enweghị nchebe. Ngwaahịa a ga-enye ndị ọrụ mmanye iwu iwu mgbidi a na - adịghị ahụ anya nke ike ...
ER3 (M) EOD robot
Isi A na-ejikarị robots EOD arụ ọrụ maka ọrụ metụtara mgbawa, enwere ike iji ya chọpụta ala nke na-esiri ụmụ mmadụ ike iru. Ihe nchoputa nke 6 nke nnwere onwe EOD nwere ike igbanwe n'akụkụ ọ bụla, ma nwee ike ịdọrọ ihe dị arọ ruo 55KG. Chassis na - ejide ihe eji eme ihe, + nke nwere ike imeghari ya na mpaghara dị iche iche wee lụsoo ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, a na-akwado robot ahụ na wired akara ma nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma site na ntanetị n'okpuru netwọk ...
ER3 (H) EOD robot
Isi A na-ejikarị robots EOD arụ ọrụ maka ọrụ metụtara mgbawa, enwere ike iji ya chọpụta ala nke na-esiri ụmụ mmadụ ike iru. Ihe ntụgharị 6-nke nnwere onwe EOD nwere ike ịtụgharị n'akụkụ ọ bụla, ma nwee ike ịdọrọ ihe dị arọ ruo 100KG. Chassis jiri usoro ihe eji eme ihe, nke nwere ike imeghari na mpaghara dị iche iche ma lụọ ọgụ ngwa ngwa. Na robot na-onwem na ngwa anya eriri akpaka waya transmitter, nke nwere ike na-achịkwa remotely site waya bụrụ na nke netwọk interf ...
ER3 (S-1) EOD robot
Isi A na-ejikarị robots EOD arụ ọrụ maka ọrụ metụtara mgbawa, enwere ike iji ya chọpụta ala nke na-esiri ụmụ mmadụ ike iru. Ihe ntụgharị 6-nke-nnwere onwe EOD manipula nwere ike ịtụgharị n'akụkụ ọ bụla, ma nwee ike ịdọrọ ihe dị arọ ruo 10.5KG. Chassis na - ejide ihe eji eme ihe, + nke nwere ike imeghari ya na mpaghara dị iche iche wee lụsoo ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, a na-eji robot ejiri wired akara ma nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma site na ntanetị n'okpuru netwọk int ...
36 Ibe EOD Ngwaọrụ na-abụghị nke Igwe Ọdụdọ
Ngwunye ngwa ọrụ na-abụghị magnetik na-ejikarị ọla kọpa beryllium eme ihe dị ka isi ihe, ọ bụkwa nke ngwaahịa mba IIC ọkwa. Ọ na-arụ ọrụ na ntinye nke 21% hydrogen ma ghara igbatu gas. Ebe ọ bụ na magnetism nke beryllium bronze ihe bụ efu, a na-akpọkwa ihe a na-akpọ beryllium bronze ngwaọrụ nke na-abụghị magnetik, nke nwere ike ịdị na ndọta. Ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi. Mgbe ndị na-agbawa agbawa tufuo ihe ndị ahụ, akụrụngwa nwere ike igbochi ọkụ na-emepụta wh ...
TFDY-03 Style Bulletproof Vest na Ngwa
Nlereanya Nke Nha Mpaghara Nchedo Mpaghara Ibu (kg) TFDY-03 S 0.28㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.3 M 0.30㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.4 L 0.32㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.5 XL 0.34㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.7 XXL 0.37㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.9 3XL 0.39㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 4.0 4XL 0.42㎡ NIJ IIIA Maka 9m ...
Foto & Mba Nha Nchedo Mpaghara Nchekwa Arọ (n'arọ) TFDY-2 S 0.26㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.0 M 0.28㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.1 L 0.30㎡ NIJ IIIA Maka 9mm & .44 Mag 3.2 XL 0.32㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 3.3 XXL 0.34㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 3.5 3XL 0.36㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 3.6 * MOLLE Webbing in front andazụ * Ikpuchi ihu, azụ na nchebe n'akụkụ * N'ihu ...
Nokpụrụ No. Size Protection Area Protection Level Weight (kg) R002 S 0.26㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 2.4 M 0.28㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 2.5 L 0.30㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 2.6 XL 0.32㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 2.7 XXL 0.34㎡ NIJ IIIA For 9mm & .44 Mag 2.8 3XL 0.36㎡ NIJ IIIA For 9mm & ...